Izinqubo okumelwe Tea iyithuluzi ekhangayo kubantu abaningi ngokweqile. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kungase kube lula - ukuphuza itiye bese ukhulisa mncane, ngaphandle ukwenza noma yini! Nokho, kufanele ngokushesha linqume ukuthi labo zezinkambi zidayiswa ezitolo noma Pharmacy njengendlela yokuthola kwesisindo, ngokuvamile aqukethe ukubunjwa yabo ndaba laxatives futhi isisu. Lokhu kuchaza ukuthi kwenzeka "neminye" umphumela zabo, okuyinto yangempela ukususwa uketshezi emzimbeni.
Lapho iziyaluyalu emathunjini kubangelwa ukuphuza itiye amakhambi laxative nezithelo kusukela ukudla iyeke ukuncela wonke umsoco (amavithamini, amaminerali). A ukusetshenziswa eside isiphuzo enjalo kunomthelela amasosha omzimba esincishisiwe leaching of calcium nosawoti umzimba ukuphazamiseka nezinso isimiso sokugaya ukudla bungene.
Indlela ukukhetha itiye isisindo ukulahleka?
Ukuze ukhethe izinga kanye itiye enempilo, zama ukuthenga ejenti eqinisekisiwe ubani iphakethe kwakungelona ngezithako zawo. Gwema zezinkambi aqukethe zokwenziwa izithasiselo, kanye labo abamagama izingxenye indistinctly kwabo okubhaliwe ngoMthethosivivinywa iphakethe. Lokhu itiye izinqubo okumelwe ngokuvamile uhlanganisa oluhlaza zezinkambi nge izakhamzimba ezihlukahlukene herbal, uye akukho GMO namakhemikhali izingxenye izithako isiphuzo akhethwe ngokucophelela.
Uma njengengxenye itiye ezihlongozwayo samanje lalesi sihlahla amagxolo, amaqabunga noma nekasiya amahlamvu Senna, uthenga laxative. Izinzuzo lokhu itiye kuyoba esincane.
Yikuphi izingxenye kungafaka zezinkambi engamakhambi isisindo ukulahleka?
izindlela Babonakala yilezi ezilandelayo: fennel, alfalfa, ginger, hawthorn, yefilakisi, Garcinia, dandelion impande noma imbiza sembabazane. Ukuze wenze itiye a abakhiqizi ukunambitheka emnandi Ungabeka kuwo namafutha noma Mint, izimbali Linden, eshiya currants kanye strawberry. Zonke lezi zitshalo ukusiza ukusheshisa umzimba, lokujabulela indlala, sisabalalise umphumela green tea polyphenol.
Ungakwazi ukuqoqa lezi zitshalo kanye ngokwakho, nokugqoka lezi iqoqo kwezokwelapha. Kungani ungabi ukulungiselela Thyme ehlobo, okusajingijolo amaqabunga, currants, Mint noma umbala lime? Konke lokhu izingxenye kungaba ukungezwa itiye eliluhlaza, ngakho uthola ewusizo futhi ngempumelelo ekulweni ukukhuluphala isiphuzo.
Umsoco itiye eliluhlaza ikhuthaza kwesisindo
Iqukethe Antioxidants, main okuyinto catechin, bohlanga izinto ngokuthi "flavonoid". catechin lokuhlushwa siphezulu kakhulu e itiye elimhlophe futhi ngokuluhlaza okotshani, kanti emnyama itiye inani ketshezi kuyehla ngenxa inqubo namachibi. Catechin kunomphumela evelele antioxidant kuka amavithamini C no E, okuyizinto Antioxidants engcono.
ENkulu itiye caffeine okuqukethwe, noma ngaphezulu ngokunembile, ngendlela ethile - theophylline. Le into uyakwazi ukusheshisa ukushiswa amafutha kanye amafutha yakhululwa esetshenziswa umzimba njengoba umthombo energy.
L-theanine - i acid acid, lokhu kuphela eziqukethwe green tea. Emzimbeni, it zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela gamma-aminobutyric acid, okuyinto nemiyo esisemqoka ngesikhathi sokudlulisa Izinzwa amaza ebuchosheni. Ukuthola okungu-L theanine ikhuthaza okuhlushwa kanyekanye izenzo ngendlela okuphumuzayo emzimbeni. L-theanine iyingxenye fat izitofu kusetshenziswa imithi ezemidlalo.
polyphenol Ngenxa eziqukethwe itiye eliluhlaza nokwanda ukushisa futhi esheshisa inqubo fat esivuthayo. Inhlanganisela catechins, theophylline futhi L-theanine unika evelele nomphumela isisindo ukunciphisa.
Indlela ukuphuza itiye isisindo ukulahleka?
Ukuze uthole inzuzo kakhulu kusukela itiye, kufanele kudliwe ngaphandle ubisi, ushukela noma ukhilimu. Libuye ungakuvumeli ukuba kwesisindo itiye amakhekhe, ama-crackers, sandwich.
okungukuthi green tea kufanele esiphuza ukuze ukunciphisa isisindo. Ukuncipha komzimba zizosebenza uma ukulisebenzisa imali ilitha ngosuku. Akumele nje overload umzimba itiye ivolumu kakhulu, uqale-ke nokusetshenziswa 2-3 izinkomishi. Khona-ke, uma isiphuzo kahle ibekezelelwe, ulilethe kuze kube nenani kuyinsakavukela Kunconywa. Nokho, it is hhayi Kunconywa ukuba baphuze ezingaphezu kuka 1.5 amalitha itiye ngosuku, futhi akufanele ukuyisebenzisa esiswini esingenalutho, ngaphandle kwalokho ngeke umonakalo isisu sakho. Isikhathi esingcono kakhulu sokuba itiye - ihora ngemuva kokudla.
A ukudla ahlukene - indlela kuphela ukulondoloza impilo
Hamsters ukuzalela ukuzalela ekhaya
Ethakazelisayo GTA: amaphoyisa